Sharci Cusub oo loogu tala galay Qaxootiga Sweden Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka SwedenSharci Cusub oo loogu tala galay Qaxootiga Sweden
April 9, 2021 Wararka Sweden, Wararka Maanta Somaliska, Warka ugu akhriska badan 0
Morgon Johansson in the government. Photo: TT
Dowlada ayaa dooneysa inay wax ka bedesho sharciyada dadka imaanaya Sweden kana yimaada wadamada kale. Waa in loo ogolaadaa oo keliya inay Iswidhan joogaan muddo cayiman.
Waqtiyadii hore, inbadan ayaa lasiiyay ogolaanshaha inay Iswiidhan sii joogaan inta ay doonaan.Qaxootiga ayaa hada loo ogolaan doonaain ay Seddex sano sii joogaan Sweden.Qof kastaa waa inuu markaa awoodi karaa inuu codsado mudo dheer uu wadanka joogayyo kaliya waxa uu u baahanyahay helista shaqo iyo barashada luuqada wadanka oo kaliya.
– Waxaan u maleynayaa in qof kastaa uu awoodo inuu sameeyo,ayuu yidhi Morgan Johanssonoo ka tirsan dawladda.
– Xeerarkeennu waxay lamid noqon doonaan xeerarka dalalka kale ee ka tirsan EU,ayuu yidhi Morgan Johansson.
Dhallinyaro badan oo keligood Iswiidhan yimid ayaa sidoo kale heli kara fursad cusub oo ay Sweden ku sii nagaadaan.
Xisbiyada Socialdemokraternaiyo Miljöpartiet ee dowladda ayaa isku raacay soo jeedinta.